8 Billood jir - Somali Kidshealth
15/06/2013 15/06/2013 by admin
Dhallaanka jira sideeda billood waxay heleen kalsooni iyo awood jirreed. Waxay si fiican hadda u barteen inay si xawli ah u guurguurtaan. Waxay awood u leeyihiin inay si taxadar leh ugu taagsadaan kursi ama sariir, oo ay yara istaagaan. Carruurta 8da billood jiraa labada bilood ee soo socota waxay sahamin doonaan inay isku dayaan inay socdaan iyagoo cuskanaya dermiga ama qalabka guriga yaal.
Bishaan qaar waalidiinta ka mid ahi carruurta waxay dhex fariisayaan kursiga socod-baradka ee la yiraahdo baby walker. Inkastoo gaariga socod-baradku aad ugu fiican yahay carruurta oo waalidiintu nafis darreemaan, haddana kursiga socod-baradku cillado ayuu leeyahay. Marka hore ilmuhu kursiga wuxuu u isticmaali karaa jaranjaro uu ku gaaro alaabada dusha sare saaran ama feerooyin kul-kulul ama tarmuus biyo kulul ka buuxaan. Tan kale gaariga socodbaradku ilmaha wuxuu ka niyad-jabiyaa ilmaha inay guurguurtaan, dhulka ku ciyaaraan, inay qabsadaan darbiyada iyo kuraasta guriga taal iyo inay kufaan oo kacaan si ay degdeg socodka ugu bartaan.
Cumrigaan ilmuhu waxay la soo baxaan xirfado darreenka ku saabsan. Tusaale ahaan, ilmuhu meel cabaar u jirta ayuu ku arkayaa boombalo uu jecel yahay, wuxuu u guurguurtaa dhinicii boombalada, dabadeed wuxuu isticmaalaa faraha iyo suulka si uu u qabsado, dabadeed wuu rux-ruxaa, dhulka ku garaacaa oo aakhirka afka la aadaa boombaladii. Xilligaan waxaa muhiim ah in guriga laga ilaaliyo wax kasta oo khatar u keeni kara ilmaha sida sunta, daawooyinka, kiimikooyinka la isku qurxiyo. Sidoo kale, alaabta boombalooyinka carruurtu ku ciyaari karo waa inaysan noqon wax ilmuhu liqi karo ama afka wada galin karo si looga hortago in ilmuhu mergado.
Dhinaca hurdada carruurta 8 billood jirka ahi waxay seexdaan 24tii saac 13-14 saacadood. Waxaa laga yaabaa inay subaxii seexdaan oo haddana seexdaan galabtii. Weli carruurtu waxay u sii baahan yihiin naas-nuujinta ama masaasada caanaha carruurta, laakiin xilliyada cuntada waxay u baahan yihiin in la siiyo mushaalidii, khudaar la shiiday iyo hilib la shiiday. Caanaha lo’da waxaa wanaagsan in loo bilaabo ilmaha marka ay jiraan halka sanno.
Bishaan ilmuhu waxay badiyaan haddaaqa oo si fiican ayay u oran karaan ba-abo ama ma-ma. Ilmuhu wuxuu fahmi karaa erayada asaasiga ah sida jaaw-jaaw bye bye IWM. Waxay soo gaaraan ilmuhu inay shacuurtooda ka muujiyaan waxay jecel yihiin iyo waxa aysan rabin markaa.
Ugu danbayn, bishaani waa bishii dhaqdhaqaaqa ee ilmaha oo taxadar ka muuji wax kasta oo khatar ku keeni kara ilmaha socod-baradka ah. Ka saar gurigaaga qalabka guryaha ee liic-liicaya oo laga yaabo inay ku soo dhacaan ilmaha. Dhammaan laalaab xargaha korontada ah ee ilmuhu soo jiidan karo. Waxyaalaha jabi kara ee meel kore saaran iyana waxaa wanaagsan in laga qaado. Goodoka korontada ee aan amaanka ahayn oo ilmuhu faraha gashan karo iyana waa in la hagaajiyaa.
nextCAABUQA DHEGAHA – EAR INFECTION